आज बैशाख २५ गते बुधवार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् तपाईको राशीफल !
बैशाख २४, २०७६ PS
मनमा मानसिक द्विविधा उत्पन्न हुनाले महत्वपुर्ण निर्णय सकेसम्म आजको दिन नलिदा नै राम्रो हुनेछ। कार्यको क्रममा लामो दुरीको यात्रा हुन सक्नेछ। साहित्य लेखनको क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। अनावश्यक बादविवादमा नफस्दा नै उत्तम हुनेछ। बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ।
मानसिक अस्थिरताले सताउने छ। जसका कारण महत्वपुर्ण कार्य हात लागि हुने छैन। यात्राको लागि समय अनुकुल रहेको छैन। लेखन साहित्यको क्षेत्रमा समय अनुकुल रहेको छ। कुनै पनि नया कार्यको प्रारम्भ सकेसम्म आजको दिन नगर्दा नै राम्रो हुनेछ।
आर्थिक दृष्टिकोणको भोलिको दिन लाभदायक रहेको छ। परिवारजनका साथमा उत्तम भोजनको अनुभूति हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। अनावश्यक खर्च हुनबाट सावधान रहनुपर्ने छ।
मानसिक बेचैनका कारण कुनै पनि महत्वपुर्ण निर्णय लिन सकिने छैन। अनावश्यक पारिवारिक कलह हुन सक्ला त्यसैले बाणीमा संयमित रहनुपर्ने छ। स्वास्थ्यमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। सामाजिक क्षेत्रमा मान प्रतिष्ठामा आंच आउने खालको काम नगर्नु होला।
अचानक मित्र भेटको सम्भावना रहेको छ। कतै रमणीय स्थानमा घुम्न जाने अवसर मिल्नेछ। निर्णय क्षमतामा कमि आउनाले महत्वपुर्ण कार्य हात लागि हुने छैन। व्यापार एवम आर्थि योगको सम्भावना रहेको छ। समग्रमा तपाईको लागि भोलिको दिन शुभ रह्रेको छ।
नया कार्यको थालनी गर्ने शुभ अवसर मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रका लागि समय लाभदायक रहेको छ। नोकरीमा पदोन्नतिको योग रहेको छ। पिताको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। पारिवारिक वातावारण सुखमय बित्नेछ।
व्यवसायिक क्षेत्रमा लाभ लाभ हुने सम्भावना रहेको छ। धार्मिक यात्रा हुन सक्नेछ। कार्यमा सहकर्मीको अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुने छैन। लेखन तथा बौद्धिक क्षेत्रमा मन लाग्नेछ। शारीरिक अस्वस्थताको अनुभूति हुनेछ।विदेशस्थित आफन्तको तर्फबाट शुभ समाचार सुन्न पाइने छ।
कार्यमा सफलता मिल्नेछैन। नयाँ कार्यको थालनी सकेसम्म नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। सरकारी तर्फबाट सफलता मिल्ने छैन। आर्थिक समस्या देखिन सक्नेछ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ।
मनोरन्जनात्मक कार्यको पछाडी दिन व्यतित भएर जानेछ। अचानक मित्रभेटको योग रहेको छ। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेको छ। साहित्य लेखन कार्यको लागि समय अनुकुल रहेको छ। व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ।
व्यापार विस्तार गर्नका लागि लाभदायक समय रहेको छ। नयाँ कार्यको थालनी गर्ने उपयुक्त समय रहेको छ। आर्थिक कारोवारमा सफलता मिल्नेछ। व्यवसायमा केहि समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। परिवारका साथमा स्वादिष्ट भोजनको अनुभूति हुनेछ।
बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। लेखन क्षेत्रमा प्रसिद्धि पाइने छ। आकस्मिक खर्च हुने सम्भावना रहेको छ। पटक सम्बन्धी समस्या देखिन सक्ने भएकाले खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु पर्नेछ।
मानसिक चिन्ताले सताउने छ। परिवारका साथमा अनावश्यक मनमुटाव हुने सम्भावना रहेको छ। नोकरी व्यवसायको क्षेत्रमा खासै सफलता मिल्ने छैन। अनावश्यक खर्चको मात्रा बढेर जानेछ। सामाजिक यश किर्तीमा हानी हुन सक्ला सावधान रहनुहोस।
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख २४, २०७६१४:०७
आज बैशाख २६ गते बिहिवार, तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् तपाईको राशीफल !